Caalamka, 01 May 2017
Ganacsade Lagu Dilay Istanbul
Warbaahinta Turkiga ayaa ku warrantay in ganacsade caan ah oo u dhashay dalka Iran iyo nin la socday oo ay shirko ahaayeen xalay lagu dilay gudaha magaalada Istanbul.
Trump oo Martiqaaday Madaxweynaha Philippine
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa martiqaad u fidiyey madaxweynaha dalka Philipline Rodrigo Duterte, si ay uga wada hadlaan arrino kala duwan oo ay ka mid tahay halista Kuuriyada Woqooyi ay ku hayso ammaanka gobolkaas.
Daalibaan oo ku Dhawaaqday Howlgal Dagaal
Kooxda Daalibaan ayaa maanta shaaca ka qaaday howl-gal dagaal oo ka dhici doona dalka Afghanistan, kaasi oo lagu beegsanayo ciidamada Mareykanka uu hogaamiyo ee “haysta” dalkaas, si waddanka looga saaro.
Qarax ka Dhacay Meel u Dhow Garoonka Dimishiq
Qarax xooggan ayaa maanta ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Dimishiq ee dalka Syria, waxaana ka dhashay dab xooggan, ayada oo la is-weydiinayo sababta keentay.
Turkiga oo Fuliyey Duqeymo ka Dhan ah Kurdish-ka
Ciidamada Turkiga ayaa maanta fuliyey duqeymo ka dhan ah mucaaradka Kurdish-ka ee ku sugan waqooyiga Ciraq iyo Waqooyiga Bari ee Syria.
Afghanistan: Wasiirkii Gaashaandhigga oo Is-casilay
Wasiirkii gaashaandhigga iyo madaxii ciidamada Afghanistan ayaa labadaba is-casilay kadib weerarkii dhimashada lahaa ee Jimcihii lagu qaaday saldhig ciidan, kaasi oo lagu dilay ugu yaraan 140 askari, tiro kale oo badanna lagu dhaawacay.
Natiijada Doorashadi France oo La Shaaciyey
Emmanuel Macron oo ka socda xisbiga dhexe iyo haweeneyda ka socota xisbiga midigta fog ee wadaniga ah ee kasoo horjeeda soogalootiga Marine Le Pen ayaa usoo gudbay wareega labaad ee doorashada madaxtinimo ee Faransiiska.
Dhageyso Dhacdooyinka Toddobaadka
Dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Dhacdooyinka Toddobaadka, waxana maanta la diyaar ah Jamaal Axmed Cismaan.
140 Ruux oo Lagu Dilay Afghanstan
Ugu yaraan 140 ruux ayaa geeriyootay kadib marki ay kooxda Taliban Jimcihii weerartay saldhig milatari oo ay leeyihiin ciidamada Dowlada Afghanstan oo ku taalla waqooyiga dalkaasi.
Waddada caanka ah ee Champs-Elysees ee magaalada Paris ayaa maanta caadi ku soo laabaneysa kadib markii nin hubeysan uu khamiistii ku dilay qof boolis ahaa, islamarkaana ku dhaawacay laba qof oo kale.
UK: Theresa May oo Ku Dhawaaqday Doorashooyin
Ra’iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa si lama-filaan aah ugu dhowaaqday doorasho guud oo cusub oo xilligeedii laga soo hormariyey oo waddankaasi ka dhacda 8-da bisha June ee soo socota.
Yildirim: Mucaaradka Ha Ixtiraamaan Natiijada
Ra’iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa maanta ugu baaqay xisbiyada mucaaradka inay ixtiraamaan natiijada aftidii dalkaas ka dhacday ee awoodaha dheeriga ah siisay madaxweynaha.